Bixiyaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab S4 waa la sifeeyey | Androidsis
Labada shirkadood ee Apple iyo Samsung, maanta, waa kuwa wax soo saara ee keliya waxay sii wadaan inay ku sharaddeeyaan kiniiniyada, oo sanad walba waxay bilaabaan cusboonaysiinta u dhiganta. Xaqiiqdii, Samsung, waxay umuuqataa inay dooneyso inay sii fogaato, sanadkii la soo dhaafayna waxay soo saartay moodel ay maamusho Windows 10, marka lagu daro dayactirka u dhigma ee moodooyinka ay maamusho Android.
Dhowr bilood, waxaan ka hadleynay Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, oo ah nooc ay jiraan waxyaabo badan oo daadanaya, laakiin ilaa maantadan la joogo ma xaqiijin karno ficil ahaan 100%, ugu yaraan illaa iyo hadda, tan iyo markii ugu horreysay ee waxa kiniinka xiga ee shirkadda weyn ee Kuuriya u ekaan doonto hadda la sifeeyey.
Xanta qaar waxay soo jeedinayaan in Samsung ay qaadan karto qaabka shaashadda 16:10 jiilkan cusub, sidaas darteedna dib ugu laabaneyso asalkeeda, maadaama jiilkii labaad uu bilaabay inuu qaato saamiga shaashadda 4: 3. Bandhigani wuxuu ina tusayaa geesaha khafiifka ah, taas oo u oggolaanaysa shaashadda in la kala bixiyo, xitaa haddii ay tani ku lug leedahay luminta astaanta shirkadda ee dhinaca hore oo ay weheliso badhanka jirka in ilaa hada lasocota badeecada noocan ah.
Badhanka jirka ee isku dhafan dareeraha faraha, wuxuu soo jeedinayaa Samsung waxaa ku jiri doona nidaamka amniga jismiyeed oo keliya. Sida aan ku arki karno bixinta, badhanka awoodda iyo mugga ayaa sii wadi doona in lagu dhigo isla goobta. Dhinaca dambe, waxaan arki karnaa sida Samsung ay u isticmaasho tikniyoolajiyadda mid ka mid ah shirkadaha codka ee ay soo iibsatay dhowr sano ka hor, AKG, si la mid ah kuwii ka horreeyay.
In kasta oo ay tahay bixin rasmi ah, wax macno ah malahan in Samsung ay ku darto astaanta Google Chrome dusheeda Halkii magaca shirkadda, markaa ma noqon karto wax keenaya waxa aan ka filan karno qarnigan afraad ee Samsung Galaxy Tab S. Bilaabashada jiilkan afraad ayaa la filayaa IFA oo lagu qaban doono Sebtember soo socota Jarmalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Bixiyaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab S4 waa la sifeeyey
Android P Beta 3 ayaa kuu oggolaanaya inaad gacanta ku dhaqaajiso habka mugdiga ah